အရသာရှိတယ်ဦးရယ် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on November 20, 2020 Author admin	Comments Off on အရသာရှိတယ်ဦးရယ်
သမီးအမည် ချိူချိူလတ် ပါ နယ်မှာလုပ်ငန်းအဆင်မပြေတော့ မြို့က အဒေါ် ဖြစ်တဲ့သူက သူ့ဆီ ထမင်းချက် အိမ်ကိစ္စ ဝိုင်းကူလုပ်ပေးဖို့ အမေဆီလာပြီး ထည့်ပေးဘို့ လစာ ကောင်းနဲ့ ပေးပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်ဖို့ တောင်းဆိုပြီး လာတောင်းရမ်တယ် နယ်ကလည်း လုပ်ငန်း အဆင်မပြေတော့ အမေကလဲ သမီးလေး စိတ်ချမ်းသာရင် ထည့်ပေးမယ်လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့ အဒေါ်ကလည်း ချိူဆီ လာပြီး ရန်ကုန်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ ပြောလာတော့တယ် ချိူလဲ မြို့ကြီး ပြကြီးမှာ လိုက်နေရမှာဆိုတော့ အစကတော့ ခက်လန့်လန့်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန် ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် မင်းသား မင်းသမီးတွေ ရှိတော့ မြင်ဖူး တွေ့ဖူးချင်နဲ့ လိုက်နေမယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်တယ် အဒေါ်လဲ ရက်တွေစောင့်မနေတော့ဘဲ ရန်ကုန် ကို နောက်နေ့ မနက်ပြောင်းဖို့ စဉ်ဆင်တော့တယ် ဟိုးရောက်တော့ အခန်း တစ်ခန်းနဲ့ အိမ်သော့ တွေ ပေးတယ် နေရာ တွေ အစဆုံး ပြောပြတယ်။
ညနေ ခြောက်နာရီ လောက်ရောက် အဒေါ် ယောက်ကျား အလုပ်က ပြန်လာပြီး ချိူနဲ့ တွေ့ပေးပြီး မိတ်ဆက် စကားပြောကြတာပေါ့ အာ့မယ် အဒေါ်ယောက်ကျားက ငယ်ငယ်လေးဘဲ အလွန်းဆုံး သုံးနှစ် သုံးသုံး လောက်ပါဘဲ ဖြူဖြူချောချော ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က အမိုက်စားကြီးဘဲ နာမည်က ကျော်ကျော် ချိူကတော့ ဦးကျော်လို့ ခေါ်လိုက်တယ် ဒီလိုနဲ့ နေလာရင် ၁ပတ်လောက် ရောက်တော့ နေရာ အခန်း မီးဘိုးခန်း ကအစ အကုန် အလွတ်မှတ်မိသွားပေါ့ တနေ့ ည ခွန်နှစ်နာရီ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲ ထိုင်ကြည့်နေတာ ဦးကျော်ကား အိမ်ရှေ့ ရောက်လာလို့ နာရီ ကြည့်မိတော့ ရခွဲနေပြီး အိမ်ပေါ်က အဒေါ်က ဆင်းလာပြီး ကျော် ပြန်လာတာ နောက်ကြလိုက်တာ ဘယ်တွေ ရောက်နေတာလည်း ဟုတ်တယ် အမ ကျော်လည်း ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ တွေ့လို့ ဒီကောင်ကို ဘီယာ နဲ့ဧည်ခံ ပေးရလို့ နည်းနည်း ကြာသွားတယ်။
အဒေါ်လည်း ဦးကျော်ကို ချစ်ပုံ ရတယ် ချစ်မှာပေါ့ အသက်က ငယ် လူကခန့်ချော အဒေါ်သက်က လေးဆယ့်တစ် ကျော်နေပြီးလေ ငယ်ငယ် ကောင်လေး တစ်ယောက် ရထားမှတော့ အူမတိုဘဲ နေမလား ကျော် ဒါဆို ရေချိူတော့လေ မမ ထမက်းခူးထားလိုက်မယ် တော်ပြီး အမ ကျော် အပြင်မှာ စားခဲ့ပြီးပြီ ရေဘဲ ချိူးတော့မယ်ဆိုပြီး အမ ပုခုံပေါ် လက်တင်ပြီး အပေါ်ထပ်ခေါ်သွားတာပေါ့ ချိူလည်း ဇာတ်လမ်းတွဲ ကောင်းနေလို့ ထပ်ကြည့်ပြီး ရှစ်နာရီ ခွဲလောက်ကြတော့ တီဗွိ ပိတ်ပြီး အောက်ထပ်က အခန်းထဲ ဝင်အိပ်မယ်လုပ်တော့ဦးကျော် အလုပ် လက်ဆွဲ အိပ်အမဲက အောက်မှာ ကျန်နေခဲ့တယ် ဒါနဲ့ ဦးကျော် ရေချိူး နေမှာဘဲ ဆိုပြီး အဒေါ် ခန်းထဲ ဝင်ပေးမလို့ လုပ်တော့ အသံတွေကြားနေရတယ် အသာလေးနားထောင်ကြည့်တော့ ကျော်ကလဲကွာ အောက်မှာ တူမ လေးရှိတယ် အစောကြီး ရှိသေးတာကို ဇွတ်ကြီးဘဲ။
အမကလည်း သူက အောက်ထပ် အိမ်မှာပါ ဘာမှာ မဖြစ်ပါဘူး ကျော် စိတ်တွေ ဒီနေ့ညမှ ဘယ်လို ဖြစ်နေလဲ မသိဘူး စိတ်အရမ်းထနေပြီး အမ ဒီနေ့ကမှာ ဆေးခန်းက ပြန်လာတာ အစာအိမ်နာနေတာ ကျော်လည်း သိရဲ့နဲ့ ပြီးတော့ ကျော်ဟာကြီးက တအိမ် လာလာထိနေတာ ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး နှစ် ရက်လောက်နေရင် ပျောက်သွားမှာပါ ဒီတိုင်းလေးဘဲ သီးခံ လိုက်ပါကွာ နော် လိမ်မာ ပါတယ် ဒါဆို ကျော်ဟာက မာနေပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အမ ပြီးအောင် မူတ်ပေး မလား ကျော်မနေနိုင်တော့လို့ပါ အဒေါ် ဒီတခါဘဲနော် အမက မမူတ်တတ်ဘူး ပြောပြီး ချိူလဲ ဘယ်လို မူတ်တာလည်း သိချင်ဇောက များနေတော့ တံခါးကို နားကပ်လိုက်တော့ တံခါးက အသာလေး ဟ သွားတယ် သြော် တံခါးက ကလှန့်မထိုးထားဘူး အတော်ဘဲ ဆိုပြီး အသာလေး ဖွင့်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ကုတင်ပေါ် ဦးကျော်က ပက်လက်အိပ်ပြီး မိုးပေါ် ထောင်တတ်နေနဲ့ ဧရာမ ခေါ် လီးဆိုတဲ့ ဟာကြီးက ထောင်နေတယ်။
အဒေါ်က ပါးစပ်ကနေ ရှေ့တိုး နောက်ဆုပ် လုပ်ပေးနေတာ တွေ့နေရတယ် အမရယ် ကောင်းလိုက်တာ ကျော် မနေတတ်တော့ဘူး မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးပါဆိုပြီး အဒေါ်ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖတ်နဲ့ ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုး နောက်ဆုပ်လုပ်ပေးနေတာပေါ့ ချိူလဲ ကြည့်နေရင်ကနေ အောက်က ပိပိ လေးကို ကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ အရည်ကြည်ခေါ် အရည်တွေ ထွက်နေမိတယ် အရမ်းလဲ ကြည့်လို့ကကောင်း ခနနေတော့ အဒေါ် ပါးစပ်ထဲကို သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်ပြီး ပြီးသွားတယ် အစက တော့ မမြင်ဖူးတာ တွေ့ရတော့ လန့်နေတာပေါ့ နောက်တော့ ဒါ သဘာဝ ဘဲလေး ဆိုပြီး အသာလေး တံခါးပိတ်ပြီး ဆင်းလာခဲ့တယ် ချိူအခန်းထဲ ရောက်တော့ ပိပိ လေးကို ကိုင်ကြည့်တော့ အရည် တွေချွဲနေတယ် ဒါနဲ့ ကလေးနဲ့ ကလိနေမိတာပေါ့ ကိုကျော် တစ်ယောက် အမ မောင်ရေဆေးလိုက်ဦးမယ် ခန လေးဆိုပြီး တံခါးအဖွင့် တံခါးနား အလုပ်အိပ်က ဘယ်လိုလုပ် ရောက်လာနေပါလိမ့် တွေးပြီး။
သြော် ဒီကောင်မလေး သူ့အဒေါ်နဲ့ငါ ကိစ္စမှန်သမျှ အကုန်သိသွားတာကိုးဆိုပြီး အောက်ထပ် ဆင်းလာပြီး ကောင်မလေး အခန်းနားစွင့်ကြည့်တော့ အီ&#8230;အိး&#8230;အာ&#8230;.အာ တွေထွက်လာတယ် ကောင်မလေး မရိုးတော့ဘူး ဒါနဲ့ နောက်နှစ်ရက်လောက် နေတော့ မနက်ရောက်တော့ ကော်ဖီး ငဲု့ပေးနေတဲ့ ကောင်မလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာမှာ ရှက်သွေး ပြန်နေတာ တွေ့နေရတယ် ဒါနဲ့ အလုပ်သွားဖို့ စဉ်ဆင်ပြီး ထွက်ခဲ့တယ် သြော် ဦးကျော်ရယ် ချိူစိတ်ထဲ သနားမိတာလား ပြောမပြတတ်ပါဘူး ညနေ ခြောက်နာရီလောက် ရောက် အဒေါ်ကမမျှော်ဘဲ ချိူက ဘာလို့ ဦးကျော်ကို မျှော်နေမိတာလဲ ဟူး ရနာရီခွဲကြတော့ ဦးကျော်ကား ရောက်လာခဲ့တယ် အဒေါ်လဲ အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာပြီး ကျော်နော်&#8230;. တနေ့&#8230;.တနေ့ မဟုတ်တော့ဘူး &#8230;.. အမ မပြောဘဲ နေနေတာ&#8230;. အလိုလိုက်လို့ နေ့တိုင်း သောက်သောက်လာနေတာ။
မဟုတ်ပါဘူး အမရယ် ကျော်က ဒါနောက်ဆုံးပါ အရင်က အရက်သောက်တာမှ မဟုတ်တာ ငယ်သူငယ်ချင်းလည်း သူ့ဇာတိ ရွာ ပြန်သွားပါပြီး ´ အင်းပါ ကဲကဲ ရေချိူးတော့ ဆိုပြီး အပေါ်ထပ် နှစ်ယောက်လုံးတတ်သွားကြတယ် ချိူလဲ ခနနေတော့ အပေါ် အသာလေးတတ်ကြည့်မိတယ် အဒေါ်တို့ ဘာတွေများ လုပ်နေကြမလဲပေါ့ တံခါးနား ရောက်တော့ ´ တော်ပြီးကွာ ကျော်လွန်းလွန်းနေပြီး အမမခံနိုင်မှန်းသိရဲ့နဲ့ ဇွတ် အတင်းထည့်နေတာ ခု အရမ်းအောင့်နေပြီး မခံနိုင်တော့ဘူး ချစ်လွန်းလို့တာ သီးခံပြီး ခံပေးရတာ အရမ်းနာနေပြီး မလုပ်ပါနဲ့တော့ ဆိုပြီး ထမိန်း ကောက်ဝတ်နေတဲ့ အဒေါ်ပုံကြည့်ပြီး ဦးကျော်ကို သနားမိတယ် ဒါနဲ့ အောက်ထပ် အသာဆင်ပြီး အခန်းထဲတွေးနေမိပြီး အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ် ´´ ဒေါက်´ဒေါက်`ဒေါက်´ အသံကြားရတော့ တံခါးခေါက်သံ မီးဖွင့်ပြီး နာရီ ကြည့်လိုက်တော့ တစ်နာရီ ထိုးနေပြီး အဒေါ်များ ဘာများဖြစ်သလဲ ဆိုပြီး တံခါးအဖွင့်။
ဟင်.. ဦးကျော် &#8230;&#8230; စကားမဆုံးသေး ချိူပါးစပ်ပိတ်ပြီး အခန်းထဲ ဆွဲခေါ်သွားပြီး ကုတင်ပေါ် အတင်းလှဲပြီး အပေါ်က ဖိထားတယ် အရက်နံ့ကလဲ နံနေတာ ချိူပါးနှစ်ဘက် ကိုအတင်းနမ်းနေတယ် ပြီးတော့ လက်တစ်ဘက်က ချိူနို့တစ်လုံးပေါ် တအားကိုင်နေတာတွေ့နေရတယ် မဖြစ်သေးပါဘူး ဦးကျော် ဘာလုပ်မလို့လဲ မလုပ်ပါနဲ့ ချိူတောင်းပန်ပါတယ် ပြောသာ ပြောရတာ တကယ် ပြန်ထွက်သွားလည်း စိုးရိမ်နေမိတယ် ဦးကျော် မနေနိုင်လို့ပါ ချိူအဒေါ်ကလည်း ဦးကျော် ဆန္ဒကို မလိုက်ရောနိုင်လို့ ချိူကိုမြင်မိထဲက ချစ်နေမိတာပါ ဦးကျော် ပြောတာယုံပါ ချိူလဲ ဦးကျော် အမ ကိစ္စတွေ သိနေပြီးသားပါ ဦးကျော်သိပါတယ် ဦးကျော်ကို လိုက်ရော ပေးပါနော် ချိူ´ မဖြစ်ဘူးထင်တယ် ချိူကအခုမှ စမှာ ချိူကြောက်တယ် အဒေါ်သိရင်လည်း ချိူရော ဦးကျော်ပါ မကောင်းဘူး မဖြစ်ပါဘူး ဘာလို့ မဖြစ်ရမှာလည်း အဒေါ်မသိအောင် နေမှာပေါ့။
ချိူလက်မခံလဲ ဦးကျော် ဇွတ်တင်းလုပ်မှာဘဲ အာ့တော့ကျမှာ ချိူနာမှာနော် ဦးကျော်ကို လိုက်ရောပေးပါ ချိူရယ် မနာ အောင်လဲ ဖြေးဖြေးချင်း လုပ်သွားမှာပါ ´ ဟူး ဒီတိုင်းဆို တားလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး ဦးကျော်ကိုလဲ သနားမိတယ် ဒါနဲ့ ခေါင်းလေး ညိမ့်ပြလိုက်တယ် ဦးကျော်လဲ ဘာမှ တွေးဝေ မနေတော့ဘူး မီးလေး ထပိတ်တယ် ပြီးတော့ ချိူအင်္ကျီ ကိုအသာလေး ချွတ်နေတယ် ရင်တွေကလည်း ခုန်လိုက်တာ ပြောမပြတတ်ပါဘဲ ဦးကျော် ချိူနူတ်ခမ်းတွေကို နမ်းနေတယ် ချိူလဲ ပြန်နမ်းမိတယ် ခနနေတော့ ချိူပိပိ ကို လက်ကလေးနဲ့ ကလိနေတယ် ယားနေပေမဲ့ မခံစားဖူးခဲ့ ဖီးလင်မျိူး ရနေတော့ တဖြေးဖြေး ကောင်းလာမိတယ် ခနလောက်နေတော့ အရည်ကြည်ထွက်နေတဲ့ အောက်ခံ ဘောင်းဘီ လေးကို အသားလေး ဆွဲချွက်ပြီး လက်ကလေးနဲ့ ထိုးထိုး ကလိပေးနေတာ ရင်ထဲ လိူင်းလုံးစီးနေသလိုဘဲ မျောမျော ပြီး အရသာတွေ့နေမိတယ်။
ချိူလက်ကို ယူပြီး သူ့ လီးပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ် ချိူလဲ မကိုင်သဖူး ကိုင်ကြည့်မိတယ် မာပြီး ကြီးလိုက်တာ လွန်းပါရော ချိူလဲ မခံစားနိုင်တော့ဘူး အရသာတွေ့နေတော့ ဦးကျော် ဘောင်းဘီ ကိုချွတ်လိုက်တယ် ပြီးလက်ကလေးနဲ့ အဒေါ်လုပ်ပေးသလို ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် လုပ်ပေးနေမိတယ် ခနနေတော့ ဦးကျော် ချိူပေါင်နှစ်ခုကြား လာထိုင်ပြီး ပိပိ ထဲကို ထည့်နေတယ် အာ´´´ ဦးကျော် ဖြေးဖြေး အရမ်းနာနေတာ မနာပါဘူး အစမို့ပါ ချိူက အရည်ချွဲနေတော့ အဝင်ထွက် ကောင်းမှာပါ ခနလေးတော့ သီးခံပါ နောက်တော့ ကောင်းလာမှာပါ ဆိုပြီး စသွင်းတယ် အစ ကတော့ နာလို့ သေးတော့မယ်။
ဦးကျော်လီး တစ်ဝက်လောက် ရောက်တော့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေ ရင် ကောင်းကောင်းလားတယ် ဦးကျော် ချိူကောင်းလာပြီး သွင်းချင် သွင်းကြည့်လေဆိုပြီး စကားအဆုံး ဦးကျော်ရဲ့ လီးက အဆုံးထိ ဝင်လာမိတယ် အဒေါ်ပြောသလိုဘဲ တစ်အိမ်ကို လာထိတော့ ကြင်တာလိုလို ကောင်းသလို ခံစားမိတယ် ဒါနဲ့ ဦးကျော်လည်း မြန်မြန်လာပြီး အား အားအား ´ ကောင်းတယ် ဦး မြန်မြန်လေး ကောင်း&#8230;အာ မြန်မြန်လေး ဦး &#8230;.. မြန်မြန် ချိူပြီးသွားတယ် ဦးကျော်လဲ ပြီးပုံရတယ် ချိူအပေါ် မှောက်ပြီး မှေးနေတယ် နှစ်ယောက်လုံး အနားယူချိန်မှာ မီးက ထဖွင့်လာတယ် ဘုဒေါ ´´ တံခါး ပေါက်က အဒေါ် ခါးထောက်ပြီးအော်လိုက်တာ အခု နှစ်ယောက်လုံး ဆင်း &#8230;&#8230; ဆိုပြီး &#8230;&#8230; ပြီးပါပြီ။
ကောင်မလေးလာခါနီးပြီ… ကျော်နိုင် လက်ကနာ၇ီကိုကြည့်ပြီး အချက်ပြတယ်.. ကျွှန်တော်နှင့်ကုလား ရယ်ဒိ ပဲဆိုတဲ့သဘော ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ်၊ ဟော.. ဟိုဘက်လမ်းကြားထဲကနေ ကောင်မလေး လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ. လှမ်းလာနြေ့ပီ။ လွယ်အိတ်လေး ကိုလွယ်ပြီး ထမင်းချိုင့်လေးဆွဲလာတဲ့ ကောင်မလေးဟာ ကျော်နိုင့်ကို မြင်တော့ တစ်ချက်တုံ့.ကနဲဇြစ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ဂ၇ုစိုက်စ၇ာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့် မျက်မှောင်လေးကြုံ.ပြီး ခပ်တင်းတင်းဆက်လျှောက်လာတယ်။ သူ ခြေလှမ်း လှမ်းလိုက်တိုင်းမှာ ပေါင်တံ လုံးလုံးလေးဟာ ဆင်စွယ်နှာမောင်းလေးလို ဝင်းကနဲ တင်းတင်းလေး ပေါ်ပေါ်လာတယ်၊တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်နှာပေါ်ဝဲကျလာတဲံ့ ဆံနွယ်လေးကို မေးလေးဆတ်ြ့ပီး ခါထုတ်လိုက် ၇င် ပေါင်ကြားထဲက ငပဲ ဆတ်ကနဲ မတ်လာအောင် ဆွဲငင်အား ကောင်းလှပါတယ်။ ကျော်နိုင်လဲဒါတွေ စွဲပြီး ကောင်မလေးကိုလိုက်တာလေ။
မိုးရွာပြီးစ ညနေခင်းလေးတစ်ခုပါ။ စိမ်းစိုနေတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်တွေကို လေနုအေးက ညင်ညင်သာသာ ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်နေတယ်။ ကောင်းကင်ပြာပေါ်မှာ ရောင်စုံသက်တန့်နဲ့ အားအင်ကုန်ခမ်းနေတဲ့ နေရောင်ခြည်ရဲ့ အလှက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမို သစ်လွင်စေပါတယ်။ လေညှင်းရဲ့အေးမြတဲ့ ထိတွေ့မှုကလည်း စိတ်ကို ကြည်နူးစေတာ အမှန်ပါ။ သာယာအေးမြတဲ့ ညနေလေးကို ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားစေတာကတော့ ချစ်သူရဲ့အပြုံးလို့ ပြောရမှာပဲ။ ကျွန်တော်နဲ့သူ စ တွေ့ဖြစ်တာ မွေးနေ့ပွဲ တစ်ခုမှာပေါ့။ ညမီး အလင်းရောင်အောက်မှာ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် အသွယ်သွယ်နဲ့ ထင်းနေအောင်လှပတဲ့မိန်းကလေးကို ကျနော်မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိခဲ့တာ။ သူကလည်း ကျွန်တော့် အကြည့်တွေကို ချက်ချင်း သဘောပေါက် နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေးရေစက်ကောင်းမှုကြောင့် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့။ သူက ကျွန်တော့်ထက် အသက်အများကြီး ငယ်တယ်ဗျ။
မှောင်မိုက်နေသောကောင်းကင်ပြင်ထက်မှာ ကြယ်ရောင်တချို့က စိန်ပွင့်လေးများကြဲပက်ထားသကဲ့သို့ တလက်လက်ဖြင့် လင်းတခါမှိန်တလှဲ့ ဖြင့် သူတို့တတ်နိုင်သော အလင်းကလေးဖြင့် ကမ္ဘာမြေထက်သို့ လင်းချပေးနေသည်။ ပူလောင်ပြင်းပြသော နွေလယ်ညရဲ့ မှောင်မိုက်မှု့အောက်မှာပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး တိတ်ဆိတ်လို့နေသည်။ သုတ်ကနဲတိုက်ခတ်လိုက်သော လေပြည်ညင်းတစ်ချက်ကြောင့် အမှောင်အောက်မှာအိပ်ငိုက်နေသော သစ်ပင်တို့လူးလွန့်လှုပ်ရှားသွားကြသည်။ “ရှဲ….” ကနဲတိုက်ခတ်လိုက်သော လေပြည်ညင်းရဲ့တိုးဝှေ့ကျီစယ်မှု့ကြောင့်လားမသိပေမဲ့တစ်ခုသော တစ်ထပ်တိုက်ကလေးရဲ့အခန်းငယ်လေးထဲမှ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်ရှိ အမျိုးသမီးတဦး အိပ်ယာထက်မှ ဖျပ်ကနဲ လန့်နိုးလာသည်။ သူမနာမည်က ခင်မဟုခေါ်သည်။တင်းတင်းပြည့်ပြည့်ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားခန္ဓာကိုယ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးခေတ်စကားဖြင့်ပြောရလျင် တော်တော်လေး ကိတ်သည်ဟုပြောရမည်။
အစ်မကိုမညှာနဲ့ ………… ရှယ်နိပ် ဖတ်ရူ့ပေးပါရှင့်။